İBB Onye na-anya ụgbọ oloko ga-eme ndị ọrụ aka ọrụ! | RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulİBB Onye na-anya ụgbọ oloko ga-eme ndị ọrụ aka ọrụ!
19 / 11 / 2019 34 Istanbul, Ọrụ, ụgbọ okporo ígwè, General, KENSİÇİ Rail Systems, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Metro, Turkey
ibb train driver ga eme ndi oru ahia
İBB Onye na-anya ụgbọ oloko ga-eme ndị ọrụ ọrụ ọrụ ;; Maka ndị na-achọ ọrụ site na Obodo isi obodo Istanbul İBB Ọrụ Ọrụ Edere ọrụ ọhụụ site na. Otu n'ime mgbasa ozi nke ndị ọrụ, nke onye ọ bụla ji nlezianya na-agbaso ụgbọ okporo ígwè ndị ọrụ ahụ na-anabata anyị. N’ozi mgbasa ozi e bipụtara na peeji nke IMM, a na-ekwuputa ngwa ngwa chọrọ maka ndị chọrọ.
G ANKWUARA NA ANY P MARA ONWE G.
N'aha akwụkwọ mkpesa nke ndị mmadụ IMM bipụtara, "Train Driver eden onye bi na Europe nke Istanbul ga-ewere ya n'ọrụ." Na mgbakwunye, ”Dika usoro mmegharị siri kpebisie ike, iji ụgbọ njem ụgbọ ala nke obodo mepere emepe ma hụ na njem dị. Anyị na-achọ ndị ọrụ ibe ha hụrụ n'anya n'anya Istanbul
AKAINKỌ AKW .KWỌ N'IVB DRR DR N'DRLỌ NCHE PERSONNEL
N’ozi mgbasa ozi e bipụtara na peeji nke IMM, ndị chọrọ ka etinye akwụkwọ opekata mpe bụ ndị na-agụsị akwụkwọ Sekọndịrị Sekọndịrị ma ọ bụ oclọ Akwụkwọ Vocational; Eletriki-Eletriki, Ugbo ala, ugboala, Teknụzụ Ozi, Kọmputa, Rail Systems, Mechatronics, Automation, Ngalaba ndị ọrụ chọrọ ka ha gụchaa.
Na ntinye, a choro ihe ndia ndi a choro n'etiti ihe ndi choro ha:
Ka ịnwe opekariri akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala B,
Ha rụchara ọrụ agha maka ụmụ nwoke,
Enweghị ihe mgbochi iji gbanwee ọrụ,
GCHN MU ka AYgwọ TRgwọ ụgbọ okporo ígwè na-akwụ?
A na-edepụta peeji nke Ọrụ İBB na ọkwa nnabata nke ụgwọ ọnwa nke onye na-anya ụgbọ oloko anaghị akwụ ụgwọ nke onye ọkwọ ụgbọ oloko ahụ, yabụ opekata mpe Puku 4 na pound 6 ka amaara na-agbanwe. (na Kamupersonel)
Nchịkwa ndị ọrụ 2019 Afọ TCDD na-aga n'ihu ka ụgwọ ọnwa nke ndị ọrụ nke afọ a chọkwara ịmata. Afọ 2019 Gịnị bụ ụgwọ ọrụ nke ndị ọrụ TCDD site n'ọrụ?
Ndị ọrụ nke General Directorate of State Railways malitere ịrụ ọrụ na 2019 ma na-enweta ụgwọ ọnwa dabere na ụgwọ a kpebiri. The Republic of Turkey State Railways mkpara ụgwọ ọnwa ọkwa na otuto na-kwukwara na-ekpebi ihe ndị bụ isi ụgwọ. Thegwọ nke ụgwọ ọrụ ndị ọrụ nke 2019 State Railways dị ka ndị a.
Dabere na ọnụego ụgwọ izizi e biri ebi; Onye isi enyemaka nke onye enyemaka na-eleta, Onye isi injinia, dibịa, onye ndụmọdụ, onye ọka iwu, onye njikwa, ndị akụrụngwa akụrụngwa, onye nnata na-esi ụgbọ mmiri, onye ọkachamara ahụike, injinia, onye ndozi ndozi okporo ụzọ, Onye na-ahụ maka njem okporo ụzọ, Onye na-ahụ maka njem okporo ụzọ, Onye isi ala ngalaba. State Railways nke Republic of Turkey, ndị a ndị mmadụ na-kasị elu ugwo ọrụ.
Gịnị bụ ụgwọ ọrụ nke ndị ọrụ ọhụrụ eweghachitere na TCDD?
Lawyer net ụgwọ maka ndị ọhụrụ State Railways: £ 5750 ugwo gburugburu.
Salarygwọ ụgwọ ọnwa maka ndị injinia a ka nwetara ọhụrụ na State Railways: £ 5600 ugwo gburugburu.
TCDD natara ụgwọ ọrụ onye ntụgharị okwu ụgbụ: £ 5200 ugwo gburugburu.
Netgwọ ụgwọ ọnwa nke ndị ọrụ agụmakwụkwọ ka elu nke ụlọ akwụkwọ mahadum na Railways State: £ 4400 ugwo gburugburu.
TCDD ndi ohuru n’uche ndi ozo n’onye akara ugo mahadum: £ 4350 ugwo gburugburu.
N ’ụlọ akwụkwọ sekọndrị a na-anata ọhụrụ n’ụlọ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ n’ụlọ akwụkwọ: £ 4150 ugwo gburugburu.
Netgwọ ọrụ ụzụ ụzụ maka ndị ụzọ njem ala Steeti: £ 4900 ugwo gburugburu.
Netgwọ ọnwa maka onye isi ọgbakọ ọhụụ na steeti Steeti: £ 4700 ugwo gburugburu.
Salarygwọ ọnwa maka ndị ọrụ ọgbara ọhụrụ zụrụ azụ na State Railways: £ 4500 ugwo gburugburu.
TCDD Wagon teknụzụ ụzụ ụgbụ: £ 4650 ugwo gburugburu
Ntugharị nke ọkwọ ụgbọala nke ọnwa si Park
IGA Gburugburu Ebe Ọdịnihu ga-eme ka mmadụ 7 binyere ọrụ nchịkọta ọzọ
TCDD Transport 25 ga - eji ọrụ ọrụ
Ụgbọ okporo ígwè Turkish ga-arụ ọrụ ọrụ
CDgbọ njem TCDD Co. Nbanye ndị ọrụ site na İŞKUR…
DHMI 3 Bin 619 ga - eji mkpara
TCDD ga-ewebata 38 Onye ọrụ na-enweghị KPSS
İBB Ọrụ Ọrụ
Purzụta nke BBB Train Driver
nnabata ụzọ ụgbọ oloko
ụgwọ ọnwa nke onye na-anya ụgbọ oloko
Zụọnụ ndị na-ahụ maka ịnya ụgbọ ala
Ntinye n'ọrụ Onye Ọkwọ ụgbọ ala